केही घण्टा फेसबुक बन्द हुँदा मार्क जुकरबर्गले अर्बौ डलर गुमाए, कति घट्यो जुकरबर्गको सम्पत्ति ? - सिधा दृष्टी
केही घण्टा फेसबुक बन्द हुँदा मार्क जुकरबर्गले अर्बौ डलर गुमाए, कति घट्यो जुकरबर्गको सम्पत्ति ?
एजेन्सी । फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा केही घण्टामै ६ बिलियन अमेरिकी डलरको नोक्सानी भएको छ । योसँगै उनी विश्वका धनी व्यक्तिहरूको सूचीमा एक स्थान तल झरेका छन् ।
केही घण्टामै ६ बिलियन डलरको नोक्सानी भएपछि जुकरबर्ग धनी व्यक्तिहरूको सूचीमा बिलगेट्स भन्दा तल झरेका हुन् । उनी पाँचौं नम्बरमा झरेका छन् ।
ब्लुमबर्गका अनुसार सोमबार फेसबुकको सेयर मूल्य ४.९ प्रतिशतले घटेको छ । सेयरको मूल्य घटेसँगै जुकरबर्गको सम्पत्ति पनि घटेको हो ।
फेसबुक र यसको स्वामित्वमा रहेका अन्य सामाजिक
सञ्जाल सोमबार ६ घण्टासम्म डाउन हुनु जुकरबर्गलाई ठूलो वित्तिय नोक्सानी पुर्‍याउने कारण मानिएको छ । यो घटनालाई फेसबुकको सेवामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो समस्या भनिएको छ ।
जुकरबर्गले आफ्ना अर्बौँ प्रयोगकर्ताको फेसबुकमा घण्टौँ बाधा पुगेकोमा माफी मागेका छन् । ६ घण्टासम्म ‘डाउन’ भएका सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्राम अहिले भने चल्न थालेका छन् ।
नेपाली समय अनुसार सोमबार राति ९ ः ३५ बजेदेखि फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्राम संसारभर ‘डाउन’ भएका थिए । ६ घण्टापछि यी सञ्जालहरू पुनः सेवामा फर्किएका हुन् ।
यी तीन सामाजिक सञ्जालमा वेब वा स्मार्टफोन एप्लिकेशनबाट पहुँच बन्द भएको थियो । फेसबुकले यसलाई नेटवर्किङसम्बन्धी समस्या बताउँदै माफी मागेको छ ।
डाउनडिटेक्टरका अनुसार यो अहिलेसम्मकै ठूलो असफलता हो । विश्वभरबाट १०.६ बिलियन समस्याहरू रिपोर्ट भएको डाउनडिटेक्टरले जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री खड्काको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख भएको जानकारी
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)का अधिकारीहरूले हालैका हप्ताहरूमा तालिबानसँग काबुल एयरपोर्ट सञ्चालन गर्ने बारे छलफल गर्नका लागि श्रृङ्खलाबद्ध छलफलहरू गरेका छन् जुन अफगानिस्तानको विश्वको मुख्य हवाई लिंकको रूपमा काम गर्दछ।
अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणमा चीनको ठूलो भूमिका रहेको तालिबानले पहिले नै बताइसकेको छ । आफ्नो पक्षको लागि, चीनले पनि अस्थिर सिनजियाङ प्रान्तमा सक्रिय उइगुरहरूलाई नियन्त्रण गर्न तालिबान शासनलाई दबाब दिइरहेको छ। चीनले तालिवानको विश्वव्यापी मान्यताका लागि कूटनीतिक समर्थन पनि बढाइरहेको छ।
भारतका विभिन्न राज्यमा स्कूल खुलेसँगै कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन थालेको छ ।विद्यार्थीलाई भौतिक उपस्थितिमै बोलाएर कक्षा सञ्चालन गर्न थालिएपछि कोरोना बढ्न थालेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।राजस्थान राज्यको जयपुरमा ११ विद्यार्थीमा कोरोना
न्यूजिल्याण्डले सन् २०२२ को अप्रिलदेखि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि सीमा खुला गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। कोभिड १९ विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका यात्रुका लागि अप्रिल ३० देखि आवागमन खुला गरिने जनाइएको छ।